TAARIIKHDII HORE EE SOMALILAND 1960, WIXII KA HOREEYEYEY QALINKII MAXAMUUD KHALIIF AXMED (ZAKI KHALIIF
Sunday March 11, 2018 - 08:11:20 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Somaliland waxay ku taal geeska Afrika, dhinaca Waqooyi galbeed waxa ka xigay deris la tahay dalka Jamhuuriyada Jabouti, galbeedna waxaa ka xiga Ethiopia, barina waxaa ka xiga maamulka Puntland. Tirada dadka Somalilad waxaa lagu qiyaasaa 3 malyan iyiyo badh. Baaxadda dhulka ay ku fadhido Somaliland waa 139,000 km2. Somaliland waxaa dhinaca waqooyiga ka xiga badda cas oo ku fadhida xeeb dhererkodu yahay 870 km2.
Diinta islaamka iyo saamaynta ay kulahayd somali
Markii diintu soo degtay qarnigii 7aad, geeska Afrika waxay noqotay meel aad u muhiima markii uu muslimay boqorkii Xabashida ee Nataashi. Waxaana xeebaha Somaliland ahaayeen meel istiraaji ah oo asxaabtii usoo hijrootay.
Qarnigii 13naad waxaa culimadii carbeed ee dalka timid kadhiseen saldanad la odhan jiray Bebad oo ay xukumi jirtay boqortooyadii Walaashma. Waana markii koowaad inta taariikhda lagu hayo qabaa'ilkii Somalidu yeeshaan maamul dhexe.
Soogelitaankii gumeestihii reer yurub
Sannadkii 1869kii ayaa waxaa la furay marinka kanaal Suways oo taasi ku dhiirigelisay gumaystayaashii reer Yurub ee Afrika qaybsaday 1884 shirkii Barlin.
Waxaana la aamisan yahay in Somaliland oo ahayd dal ku fiican dhinaca istiraajiyada oo isku xidhaayey bada cas iyo bad weynta India. Haddaba salaanka gumaystayaasha ee Somaliland waxaa uu kaw saday 1839kii markii Ingiriisku qabsaday magaalada xeebta ah ee Cadan.
Sannadkii 1827kii ayaa Captain Bermer oo ahaa badmareenadii ingiriis ahi yimid Somaliland oo uu xidhiidh la yeeshay odayaashii dhaqanka ee Somaliland. Lugtii ay lasoo galeen gumaystayaashu Somaliland waxay dhaafi kari waayeen xeebaha waxaana usuuroobi wayday inay waddanka horuu galaan intii ka horraysay Captain Sir Richman Burton. Mr. Burton wuxuu galay gudaha dalka waxaanu tagay dhulka miyiga ah, waxaana uu sanadii 1854kii lug kumaray xeebta Berbera ilaa magaalada Herar.
Hadaba Boqortooyadii Engiriiska waxay yimaadeen xeebaha Somaliland. Ingiriisku dhowr jeer buu heshiisyo kala duwan la saxeexday odoyaashii Somaliland. Waxanaa ugu caansan heshiiskii hargaha ee sannadkii 1887kii oo heshiisyo la saxeexdeen odoyaashii Beelaha Somaliland.
Sannadkii 1899kii waxaa bilawday kacdoon iyo dhaq dhaqaaqyo lagaga soo jeedo gumaysigii ingiriiska. Waxaana guluf iyo dagaal dhexmaray ciidamadii Sayidka ee daraawiishta iyo dawladdii Ingiriiska . Ugu danbayna waxaa la jebiyey Mohamed Cabdulle Xasan sannadku markuu ahaa 1921kii.
Waxaana halkaas kasii anbaqaaday halgamaayaashii Shiikh Bashir iyo Farah Omaar usoo halgamay xornimadii aan qaadanay lixdankii. Waxaana dalka ka bilwaday kacdoon gobonidoon dagaalkii labaad dabadiisii.
Dawlada Ethiopia ayaa waxay qorshaynaysay sidii ay u aqoon san lahayd somalailand
Bishii febraayo 1960kii ayaa wefti uu hoggaaminaayo Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal u anbaxaxeen dalka Ingiriiska, waxaanay heshiis ay la soo galeen dawladdii ingiriiska in Somaliland xornimo buuxda lasiiyo.
26 Juun 1960kii bay markii maxmiyadii ingriiska ee Somaliland "British Somaliland protectorate" xornimadeeda ka qaateen dawladii Ingiriiska,sida aan la socono intii ka horraysay 01 Luulyo 1960kii Somaliland waxay ahayd dawlad gooniya( indepedent state). waxayna noqdeen dawlad madax bannaan oo la aqoonsan yahay ilaa 01 Luulyo 1960kii. Isla maalintaas Koonfurtu xorayday ayaa labada dal midoobeen inkastoo midawgaas mad madaw badani ku jiro. Dad badanina u haystaan in midowgaasi ahayn mid sharciya.
Shacabka reer somaliland oo markiiba inay darameen cuqdad inay hayso
Dadka reer Somaliland waxay midow ku sheegaas doonayeen inay kaga dhabeeyaan riyadoodii ahayd in la sameeyo dawlad salbalaadhan oo ay kasoo qayb galaan wixii afsoomali ku hadlaa meel kastoo ay joogaanba. Laakiin waxaa markiiba beenawday riyadaas, dadka reer Somalilandna waxaa la duudsiiyey xuquuqdii wadaniyeed ee ay lahayeen.
Dadka reer Somaliland oo markiiba dareemay in la khiyaamay oo isla markiiba bilaabay inay xornimadooda kala soo noqdaan reer koonfureedka, wax
TELL 0634318306 0659335346